Batra oo lagu taliyey in hoggaamiye u noqoto xisbiga Moderaterna - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anna Kinberg Batra oo lagu taliyey in laga dhigo hogaaamiyaha cusub ee xisbiga Moderaternas. Foto: TT
Batra oo lagu taliyey in hoggaamiye u noqoto xisbiga Moderaterna
La daabacay torsdag 11 december 2014 kl 14.48
Todobaadkan waxaa lagu taliyey in xisbiga Moderaterna hogaamiye loogu doorto Anna Kindberg Batra. Waa hogaamiye marka loo barbardhigi Fredrik Reinfeldt ah leberal u janjeera arrimaha bulshada, sidaa waxaa yeri Mattias Svensson oo ka howlgala wargeyska Neo.
- Waxaan qabaa in ay aaminsan tahay mabd’a liberali ah oo xogga ka yaro ah. Gaar ahaan markey timaado arrimaha la xiriira xoriyadda qofka halka Fredrik Reinfeldt aragtidiisa arrimahan ahaayeen konservatit.
Todobaadkan ayaa guddiga doorashada ee xisbiag Moderaterna ku taliyeen in hogaamiyaha xisbigan loo doorto Anna Kindberg Batra. Sida la filayana waxay u muuqataa in ay kalo wareegi doonto hogaanka xisbiga Fredrik Reinfeldt marka la qabto kulan weynaha dheerad ah ee xisbiga 10ka bisha januari.
Laakiin inkastoo ay waqti dheer kaliin wax ku ool ah ku dhex laheyd xisbiga Moderaterna- maanta u tahay afhayeenka xisbiga ee arrimaha dhaqaalaha iyo heysano hogaanka xildhibaanada xisbiga ku leeyahay baarlamaanka- balse banaanka xisbiga ayeysan jirin cid ka taqaana.
Mattias Svensson, oo ah soo saaraha wargeyska Neo oo ah wargeys dhanka afkaarta u janjeera hanti goosad ayaa ku tilmaamey Anna Kindberg Batra in ay tahay ruux hami leh oo ah siyaasi hogaamintiisa ay ka furfuran tahay tan hogaamiyaha xilka kalo wareegeyso Reinfeldt.
Mattias Svensson waxuu aaminsa yahay in ay dhib ku noqon doonta Kindberg Batra kor u soo qaadida su’aalaha qalbigeeda u dhow madaama ay si daacad ah u raacdey dhabii uu jeexay Reinfeldt inta uu xilka hayey. Inkastoo ay si cad u taageertay in dadka homosexuellka ay xog u yeeshan helida caruur in ay korsadaan halka midda xisbigeeda ka soo horjeedey markii baarlamaanka dalka arrintaan loo soo bandhigey. Horey sidoo kale waxay u taageertey in qaxootiga sharic la’aanta ah ee dalka ku dhuumanaya la siiyo amnisty iyo weliba in kirada guriyaha laga dhigo mid la socda qiimaha suuqa. Arrimahan ayaa marqaati u noqon kara in ay tahay ruuxd xisbiga Moderaterna u janjeerisa afkaarta liberaliga, taas oo ah dhabo ka gedisan dhabahii uu xisbiag marsiiiyey Fredrik Reinfeldt, ayuu yeri.
Sidoo kale ma jiraan waxyaalo cadeyanya in Xsbiga Moderterna ay ku leexin doonto dhabo soo galooti diid ah, sida uu yeri Mattias Svensson.
- Ma qabo in Moderaterna ay u furan tahay meel ay ka noqdaan oo ay ugu noqdaan siyaasad xadidan oo soogalooti, siyaasadda noocaas waxaa xisbigan iskaga tagay ka dib doorashadii guuldrada badneyd ee 2002. Xisbi ay tahay in uu xanbaaro qaraan suurtogal mahan in uu xodxodto awoodaha siyaasadeed ee noocaan ah. Balse dabcan xisbiga waa soo bandhigi karaan siyaasad ku dhisan masuuliyad ku qotanta in qarashaadka ku baxaysa soogallotiag in aysan faraha ka baxin. Markaas waxaa laysku dayayaa yareynya qarashka ee layskuma dayayo yareynta dadka, ayuu yeri Mattaisa Svensson.
Anna Kinberg Batra 44 sann jir tan iyo 206 aheyd xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dalka. 2010kii ayey u noqotay hogaamiye xildhibaanada Moderaterna ku leeyahay baarlamaanka dalka. Sannadkii 1998 ayey saxaafadda dalka caan ka noqotay, ka dib markii ay wareysi ay abxineysey ku tiri Dadka Stockholm wey ka aqli badna yahiin dadka miyaga dalka ku nool.